China SSM-350-23A VOV Patenti Ichapu Mgbu maka ndị na-emepụta okporo ụzọ na ndị na-eweta ya | Ngwaọrụ Shuangshi
SSM-350-23A VOV Ezigbo Icha Ezé Maka Roadzọ
Supplier / wholeslaer / emeputa nke 14 ”(376mm) 26T diamond ịcha pupụtara / hụrụ pupụtara / okirikiri pupụtara maka ụzọ
Net arọ (g) 1.9kg
Ọnụ ọgụgụ nke Ezé 23T
Agụba dayameta 14 "(376mm)
Ọkpụrụkpụ Agụba 3.2-3.4mm
Ngwaahịa a jiri 350mm VOV ezé, nke ndị injinia anyị mepụtara nke ọma na ikike nke andlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihe Ọmụma nke Ọchịchị nke Ndị Republic of China.
A haziri akụkụ ahụ n'ụdị leta V na O, anyị na-akpọ ya ezé VOV.
Ọdịiche dị iche iche dị iche iche nwere ike imeziwanye ma mekwuo arụmọrụ mbelata, mpaghara kọntaktị ya na ihe mkpụmkpụ pere mpe, arụmọrụ ikpo ọkụ ka mma ma belata esemokwu. N'otu ọnọdụ ahụ, ngwaahịa anyị dị nkọ ma dịkwa ọsọ ọsọ karịa mmaala izugbe.
Mgbe ezé abụọ V ahụ na-eyi ruo n'ókè ụfọdụ, a ga-eyikwa okirikiri echekwara O, iji mepụta ezé ọhụrụ VOV, na-eme ka ịcha ọsọ na arụmọrụ ka ị na-amụba ngwa ahịa ngwaahịa. Lee eserese maka nkọwa.
Diamond agụba na-akpọ diamond ọnwụ diski, bụ a diamond hụrụ agụba nke nwere diamond agba na ya onu maka ịcha ike ma ọ bụ abrasive ihe. E nwere ọtụtụ ụdị nke diamond agụba, na okirikiri diamond hụrụ pupụtara bụ ndị kasị n'ọtụtụ ebe na ụdị ụdị diamond agụba. Ngwa ndị ahụ gụnyere marble, granite, concrete, asphalt, masonry, brik, iko, na ceramik na ụlọ ọrụ ihe owuwu. A na-enwekwa usoro ebumnuche ndị isi. Usoro imepụta nke diamond blades gụnyere nsị, brazing agụụ na electroplating.
Mkpụrụ obi diamond adịghị “ebipụ” dị ka mma… ha na-egweri. A na-ekpughere kristal ndị dị iche iche na mpụga na mpụga na akụkụ nke akụkụ diamond ma ọ bụ rim n'oge usoro mmepụta. Okpu diamond a na-ekpughere ekpughere na-arụ ọrụ egweri. Ngwongwo ọla na-ekpochi diamond ọ bụla n'ọnọdụ ya. Gbaso n’azụ diamond ọ bụla ekpughere bụ “agbụ ọdụ” nke na-enyere aka ịkwado diamond ahụ.
Ọ bụ ezie na agụba diamond na-agbagharị n'ọdụ ụgbọ mmiri nke hụrụ, onye ọrụ ahụ na-agbanye agụba diamond n'ime ihe eji egbu ihe. Agụba na-amalite ịkpụpu ihe ahụ, ebe ihe ahụ na-amalite ịkpụpu mma. Achọpụtara, elu diamonds akara ihe, egweri ya n'ime ezigbo ntụ ntụ. Nkume ndị agbakwunyere agbadoro na-adị n'okpuru elu ala. Okpueze ndị a na-ekpughere ekpughe na-agbaji ma ọ bụ kụwaa ka ha na-egbutu, na-agbada ọbụna n’obere iberibe. Ihe siri ike, nke dị egwu na-eme ka diamonds gbawaa ọbụna ngwa ngwa.
Nke gara aga: 100mm Ugboro abụọ Ahịrị Diamond-egweri Cup Wheel
Osote: SSM-350 / 500-23 / 35C VOV Patent Diamond Saw Blade for Concrete Road
SSM-350 / 500-23 / 35C VOV Patent Diamond Hụrụ Agụba ...